Huawei Watch 3, na HarmonyOS bu ihe nlere anya smartwatch | Akụrụngwa Akụkọ
Huawei Watch 3, na HarmonyOS bụ smartwatch nke nrụtụ aka
Miguel Hernandez | 26/06/2021 20:04 | Emelitere ka 26/06/2021 20:56 | Ngwaọrụ yi, Ngwa, smartwatch
Anyị ewetabeghị anya elele anya na weebụsaịtị anyị ruo oge ụfọdụ, yabụ taa bụ ụbọchị dị mma iji soro gị nyocha nke smartwatch kachasị ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ na ahịa, Huawei Watch 3, nke na-eweta ọtụtụ ihe karịa ngwaike na imewe Ọdịdị dị elu, ọ na-esonyere Harmony OS 2.0, sistemụ arụmọrụ nke Huawei chọrọ iji wezuga onwe ya na Google na njedebe.
Ekwenyesiri m ike na ọ bụghị, ya mere sonyere anyị na nyocha a.
Nke mbu na dika ihe obula, anyi na echetara gi na anyi nwere ihe nlere vidiyo di na channel anyi YouTube, ya mere, egbula ohere ịdenye aha ma lelee nyocha a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara elekere nke ị na-agaghị ezuru nkọwa.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, zụta ya na ọnụahịa kacha mma> BUYE
1 Design: More adịchaghị, ọzọ Huawei
2 Akụrụngwa na ngwanrọ, HarmonyOS bụ icing na achicha ahụ
3 Ihuenyo na njikọta, ọ dịghị ihe na-efu
4 Sensọ ebe niile na ọtụtụ ọzụzụ
Design: More adịchaghị, ọzọ Huawei
The ngwaọrụ nwere ugbua njirimara gburugburu imewe ọzọ ka ihe Apple na-enye. Huawei's smartwatch zuru oke ma O nwere akụkụ nke 46,2 x 46,2 x 12 millimeters nke juru ha anya site na nnukwu ha, ihe dị iche n'ụdị elekere a. Nke a dị egwu, mana anyị nwere ike ịsị na ọ naghị eme anyị "gabiga oke" nnukwu.
Nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kacha mma na Amazon
Maka akụkụ ya, elekere ahụ nwere chassis ojii zuru oke na mbipụta nke anyị nwalere na eriri silicone. Anyị na-echeta na Huawei ga-ebupụtakwa ụdị nke etinyere kpamkpam na titanium, yana eriri n'otu okwu ahụ ma anyị nwere ike ịzụta eriri dị iche iche site na iji usoro mmechi dị mfe na isi ahịa nke mbụ. N'ihe banyere ibu, naanị gram 52, Huawei Watch 3 tụrụ ya n'anya. Ihe owuwu ahụ dị ezigbo mma, ọ na-adị adịchaghị n'otu ụzọ ahụ a na-eme ntọala ahụ site na ihe na-egbu maramara plastic / seramiiki. Ọ naghị ewe nnukwu ọgwụgwọ iji mata na ọ bụ ngwaahịa dị elu.
Akụrụngwa na ngwanrọ, HarmonyOS bụ icing na achicha ahụ
Iji mezuo ọrụ ndị a na-emebu, ụlọ ọrụ Asia kpebiri ịtọlite ​​nhazi nke ya, na HiSilicon Hi6262, Yabụ na ụdị a, ọ naghị arịgo ndị na-arụ ọrụ site na mpaghara Kirin, nke bụ maka ngwaọrụ ndị chọrọ ikike dị elu. Anyị nwere 2 GB nke Ram isonye na processor na ọbụna 16 GB nke nchekwa ngụkọta maka ma ngwa ma dakọtara ọdịnaya audiovisual.
Ọrụ iji wepu mmiri
Nguzogide ihe ruru 5 ATM
Sistemụ arụmọrụ nke ọla a maka nkwojiaka bụ Mmetụta 2.0, ngwaọrụ Huawei mbụ nwere sistemụ a na-eru ọha na eze. Mmetụta anyị na-enwu gbaa HarmonyOS na-eme nke ọma ma anyị ahụghị nsogbu ọ bụla - n'eziokwu, ọ na-asọ mpi ahụ ozugbo, yana ọnụego ọsọ dị elu karịa Wear OS na Samsung. Ọ nwere nke ya Huawei App Gallery maka Watch, dị mwute ikwu na anyị ahụbeghị ngwa mara mma iji wee rụ ọrụ a. Otú ọ dị, ngwa ndị arụnyere na obodo ha adịla ka ha zuru oke, yana njikọta ya na Huawei Health ngwa anyị kwadoro ka wụnye site na App Gallery.
Ihuenyo na njikọta, ọ dịghị ihe na-efu
Anyị nwere ndị a ma ama panel 1,43-anụ ọhịa AMOLED nke na-enye ngụkọta nke 466 x 466 pikselụ, n'ihi na anyị nwere 326 pikselụ kwa inch. Enyere na ọnụego ihe ọ softụ softụ dị nro nke 60 Hz, nke kariri ihe zuru oke maka onodu smart smart. Tumadi pụta ìhè eziokwu na anyị nwere a kacha nke 1.000 nits nke ìhè, ihe a na-ahụkarị na mpụga ebe anyị nwere ike iji ike a rụọ ọrụ ebe ọ bụ na iji ya n'ehihie bụ ihe zuru oke ma dị mma, na-enweghị ntụgharị uche ma ọ bụ ụdị nsogbu ọ bụla sitere na ya.
Banyere njikọta, anyị nwere njikọta - 4G site na eSIM, nke n'oge a bụ naanị dakọtara na nsụgharị nke Movistar na O2, na-ebute ụfọdụ nsogbu na oroma, Vodafone na ihe ndị ọzọ. Anyị nwekwara NFC Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ n'ihi na Huawei ka na-arụ ọrụ na nkwekọrịta na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Nwere Bluetooth 5.2 na WiFi 802.11n maka njikọ ndị ọzọ, ihe ga - eme ka anyị nwee okomoko nke na - agaghị efu ihe ọ bụla.
Sensọ ebe niile na ọtụtụ ọzụzụ
Anyị nwere ọnụ ọgụgụ ọgụgụ a dị ukwuu, yabụ anyị nwere obi abụọ na ị nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla nke Huawei Watch 3 enweghị ike ịtụle:
Mmetụta ikuku oxygen
N'oge a temometa bụ naanị ike iji tụọ anụ ahụ, mana n'oge ọnwa Julaị anyị ga-enweta mmelite nke ga-enyere anyị aka ịlele okpomoku nke anụ ahụ. The barometer bụ nnọọ ezi na otu na-eme na ike nke sensọ na nke Huawei O gosiputala irè ya na nsụgharị ndị gara aga nke elekere smart ya.
Banyere ọzụzụ anyị nwere karịa 100 nsụgharị dị iche iche, nke ahụ ga-enye anyị nsonaazụ a pụrụ ịdabere na ngwa Huawei Health. Nke a bụ smartwatch nke ụlọ ọrụ siri ike nke nwere ohere dịgasị iche iche na nke a.
Ekwenyere nnwere onwe nke ngwaọrụ ahụ bụ ụbọchị nwere ikike niile na-arụ ọrụ ma ruo ụbọchị 14 ma ọ bụrụ na anyị gaa ọnọdụ nchekwa nchekwa. N'ime ule anyị, anyị enwetawo ụbọchị 2 nke kachasị ojiji yana ihe dị ka ụbọchị iri na abụọ ọ ga-enye anyị n'ogo nke ike nchekwa, Huawei kwere anyị nkwa na na mmelite na-esote anyị ga-enweta nsonaazụ ndị ika ahụ kwere nkwa.
Nke a Huawei Watch 3 dị ka nke mbụ litmus ule nke HarmonyOS na ugbu a ọ gaferela oke, n'eziokwu, ahụmịhe onye ọrụ ka nke ọtụtụ ụdị gara aga nke Apple Watch ma dị mma karịa Wear OS. Obi abụọ adịghị ya, a na-etinye otu elekere nke 369 euro (ya na FreeBuds 3 dị ka onyinye) nke na-anọgide n'ọkwa dị elu dị ka ụdị ọgụgụ isi ọgụgụ isi site n'echiche m maka gam akporo.
Ihe na: 26 June nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 26 June nke 2021
Nhazi na ihe di iche iche
HarmonyOS egosila oke ike na oke mmiri
Ọ dịghị ihe na-efu na ngwaike ngwaike
App Gallery chọrọ ego ọzọ
Nnwere onwe amalitebeghị ihe ekwere na nkwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Huawei Watch 3, na HarmonyOS bụ smartwatch nke nrụtụ aka
Realme TechLife Robot Vacuum, onye na-ehichapụ robot nwere ezigbo mma / ọnụahịa
Na-erite uru nke azụmahịa ndị a dị egwu na ngwaahịa Oclean maka ọkachamara ọkachamara